Mandrisika ny Kazaka Hiteny ny Tenindrazany Ilay Mpihira Italiana	Voadika ny 24 Oktobra 2012 1:29 GMT
Zarao: Manao onjana mozika any Kazakstana ny teratany Italiana, Son Pascal, mpihira sy mpamorona. Nanefy ny lazany teo an-toerana tamin'ny alalan'ny famadihana ho karazana hanihanin'ny hiran'i Sting “Lehilahy Anglisy any “New york” i Pascal, izay tsy ampy iray taona akory izay no nahatongavany eto Kazakstana.
Son Pascal mitendry yhe dombra [fitaovana nasionaly Kazaka].”Tsy afaka manao ny hiram-pirenena Kazaka aho, fa afaka mitendry izany,” hoy ity mpanakato tanora ity tamin'ny Global Voices Online. Sary manokana nahazoana ny fanmezàn-dàlan'ny mpanoratra.GV:Zava-dehibe toy inona ny mozika aminao ka hoe ahafahana mitahiry ny fomba fiteny iray?
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraAltynai Sydykova
Tantaran'ny Azia Afovoany sy Kaokazy farany 23 ora izayTajikistanFantaro ireo lehilahy afa-nidify ireo polisy miafin'ny volombava ao Tajikistan
Azia Afovoany sy KaokazyItaliaKazakhstan
Hafanàm-po nomerikaMediam-bahoakaMozikaZavakanto & Kolontsaina